Soo dejisan Polaris Office 9.101.12.38379 – Windows – Vessoft
WindowsXafiiskaSoftware softwarePolaris Office
Polaris Office – editor ah in la files xafiiska shaqeeyaan. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan, aragtida iyo edit wax qaabab file xafiiska ay ka mid yihiin la daawado ee PDF-files. Xafiiska Polaris ka kooban dhowr qaybood ugu muhiimsan sida editor qoraal ah, simbiriirixan sayidkiisa, buug iyo editor isbiriidhshiit. software ayaa si toos ah cusbooneysiisaa waraaqaha ka tafatirka ee la soo dhaafay iyadoo la isticmaalayo .Wadashaqayntaas ee files badbaadiyey qalabka kale. Xafiiska Polaris macaamila DropBox, Google Drive, OneDrive, Box iyo storages kale daruur. Xafiiska Polaris ku jira xaddi weyn oo habyaalada ee qoraalka waraaqaha, barasantigareeyaan iyo bogagga.
Waxay abuurtaa iyo tifatirada waraaqaha xafiiska
Galitaanka ee PDF-files
.Wadashaqayntaas Dukumentiyada ka qalab mobile
Isku dhex leh storages daruur